काठमाडौ उपत्यकामा अब दिउँसै मापसे जाँच « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौ उपत्यकामा अब दिउँसै मापसे जाँच
काठमाडौ । तपाईं दिउँसै मादकपदार्थ सेवन गरी कतै सवारीसाधन चलाउँदै त हुनुहुन्न ? चलाएको भए अब नचलाउनुहोस्, नत्र कारबाहीमा पर्नुहोला । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौ उपत्यकामा दिउँसो मापसे गरी सवारी चलाउने चालकमाथि कारबाही थालेको छ ।
राति ८ देखि ११ बजेसम्म मापसे गर्नेमाथि कारबाही गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले केही दिनयता दिउँसोसमेत जाँच गर्न शुरु गरेको हो । महाशाखाका प्रवक्ता उमेश रञ्जितकारले ट्राफिक प्रहरीको राति एकै समय मापसे जाँच गर्दा चालकले छल्नका लागि दिउँसै मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउन थालेपछि दिउँसै जाँच गर्न शुरु गरिएको बताए ।
‘सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनलाई बाधा नपर्ने गरी क्रमशः दुई चारवटा सवारीसाधनलाई सडकको किनारामा ल्याएर जाँच गर्न थालेका छौं,’ उनले भने । दिउँसो कार्यालय छाडेर घर जाने समयमा मापसे गरेर सवारी चलाएको पाइएको उनले बताए ।
महाशाखाले विसं २०६८ मंसिर १७ देखि मापसे गरी सवारी चलाउने चालकमाथि जाँच गर्दै आएको हो । प्रवक्ता रञ्जितकारले पछिल्लो समय मापसे गरी सवारी चलाउने र दुर्घटना हुने सङ्ख्यामा कमी आएको बताए ।
ट्राफिक प्रहरीले मापसे गरी सवारीसाधन चलाउने सवारीसाधनलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र भए १ हजार र नभए २ हजार जरिवाना लिँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ कार्तिक २१
नेपाल सरकारको निरिहताको फाइदा लुट्दै भारतीय मालबाहक ट्रक भारबाहन क्षमताभन्दा दोब्बर लोड बोकेर नेपाल भित्रिदैं
कपिलवस्तु । नेपाल सरकारको निरिहताको फाइदा लुट्दै भारतीय मालबाहक ट्रक भारबाहन क्षमताभन्दा दोब्बर लोड बोकेर
यस्तो छ प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने आधारहरु
मोरङ । प्रदेश नं १ को प्रदेश सरकार विभिन्न शहीद भूमिमा नमूना बस्ती निर्माण गर्ने